Ikhosi yeArcGIS Pro-ukusuka kwi-zero ukuya phambili kunye ne-ArcPy-Geofumadas
Ikhaya/Izifundo ze-AulaGEO/Ikhosi yeArcGIS Pro-zero ukuya phambili kunye neArcPy
Ngaba uyafuna ukufunda ukusebenzisa izixhobo ezinikezwe yiArcGIS Pro, ukuqala ekuqaleni? Le khosi ibandakanya iziseko zeArcGIS Pro; ukuhlela idatha, iindlela zokukhetha ezisekwe kuphawu, ukudala imimandla enomdla. Emva koko kubandakanya ukufakwa ekhompyutheni, ukongeza iileya, iitafile zokuhlela kunye neekholamu kwiimpawu.
Uya kufunda kwakhona ukuba uyila njani umxholo ngokusekwe kwiimpawu, ukungenisa idatha kwi-Excel, uhlalutyo lwee-buffers kunye ne-georeference yomfanekiso. Le khosi ibandakanya inyathelo ngenyathelo lokuzilolonga elisetyenzisiweyo kwimeko ye-AulaGEO. Funda inqanaba eliphambili leArcGIS Pro.
Ikhosi yonke isetyenziswe kwimeko enye ngokwe-AulaGEO indlela.
Funda iArcGIS Pro kwasekuqaleni
Yenza, ungenise idatha, uhlalutye kwaye wenze iimephu zokugqibela
Funda ngokwenza, ngokwenyathelo ngamanyathelo okusetyenziswa kwamatyala-Zonke zikwindawo enye yedatha
I-ArcGIS Pro iqhubekile
Ikhosi isusela ekuqaleni. Ke inokuthathwa yingcali yobunjineli be-geo okanye umntu othanda uyilo.
Wonke umntu ofuna ukuphucula iprofayili yakhe kunye nokwandisa amathuba abo kuyilo lwe-geospatial kunye nohlalutyo.
Abasebenzisi be-GIS abasebenzisa iinguqulelo zeArcGIS Desktop kwaye bafuna ukufunda indlela yokwenza inkqubo ngeArcGIS Pro
Ikhosi ye-Civil 3D-Ubungcali kwimisebenzi yoluntu